Mendrika Ny Tsaratsara Lavitra Noho Izao Ireo Mpiasa An-trano Any Amin’ny Ampahan’ny Tanibe Indiana · Global Voices teny Malagasy
Mendrika Ny Tsaratsara Lavitra Noho Izao Ireo Mpiasa An-trano Any Amin'ny Ampahan'ny Tanibe Indiana
Voadika ny 09 Desambra 2015 2:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Ελληνικά, English
Fahita matetika any India ny ankizy miasa an-trano, miaraka amin'ireo ankzy alefan'ny ray aman-dreniny mba hahazoana vola fanampiny, na voararan'ny governemanta aza izany. Sary an'i Biswarup Gangly tamin'ny Wikimedia Commons. BY-SA 3.0
Manana fomba nentin-drazana hatrizay amin'ny fampiasàna lehilahy na vehivavy miasa an-trano ny ampahan'ny tanibe Indiana. Ao India fotsiny izao, misy olona miisa 5 tapitrisa tsy manana traikefa miasa any an-tranon'olon-kafa — vehivavy no ankamaroan'ireo ary tsy ampy taona ny sasany.
Matetika tsy manana zo hahazo andro tsy fiasàna andraisam-bola izy ireo, na koa ora amboni ampanga, fisotroan-dronona na tombontsoa hafa tahàka ny an'ireo mpiasa hafa amin'ny indostria. Tsy heverin'ny olona ho hery ilaina izy ireo, ary zara raha mahazo karama kely ary indraindray iharan'ny herisetra an-tokantrano. Mety mikarama eo amin'ny 6.000 roupies ($90) isam-bolana eo ho eo ny vehivavy mpiasa an-trano iray any India, ho an'ny asa an-trano 10 hatramin'ny 14 ora.
Skand Shukla, manoratra ao amin'ny gazety an-tsoratra Indiana, The Hindu, hoe matetika ampitaina am-bava fotsiny ireo fepetra iasàna:
Ny karama, mazava ho azy, miankina amin'ny isan'ny olona ao amin'ny fianakaviana, ireo vahiny mitsidika azy, ireo zaza ao amin'ny fianakaviana, ny isan'ny efitrano… Ireto avy no tafiditra ao anatin'ilay karama, ankoatra ny lelavola, ny ‘tyohaari’ [Bakhsish na taridàlana] mandritry ny [fialantsasatra toy ny] Holi, Deepavali sy ireo karazana fotoana hafa.
Amin'ireo trano sasany, miditra anaty kajy koa ny saranga niavian'ny mpiasa, ary tsy mitovy ny fikarakaràna ireo avy amin'ny saranga ambany — ohatra, tsy mahazo mipetraka amin'ny seza ampiasain'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana izy ireo.
Akaiky, nefa mbola lavitra
Jannatul Mawa, mpikatroka mafana fo eo amin'ny fiarahamonina Bangla sady mpaka sary amin'ny fanadihadiana, nampiseho io tsy fitoviana io amin'ny alalan'ny sary. Amin'ny tetikasany “Elanelana Mifanakaiky” dia naka sary ireo mpiasa an-trano mipetraka miaraka amin'ireo mpampiasa azy izy, mibaribary ny fahasamihafàna misy amin'izy ireo.
Elanelana Mifanakaiky. Ny tsy fitoviana eo amin'ny mpiasa an-trano sy ny mpampiasa. Sary an'i Jannatul Mawa. Nahazoana alàlana.
Elanelana Mifanakaiky. Ny tsy fitoviana eo amin'ny mpiasa an-trano sy ny mpampiasa . Sary an'i Jannatul Mawa. Nahazoana alàlana.
Manoratra izao i Mawa:
Amin'ny fiarahamonina, hita hoe ireo vehivavy ihany no manao ny asa an-trano izay mahatafiditra ireo vehivavy mpiasa avy amin'ny saranga antonony ihany koa. Itoviana io raharaha an-trano io ho azy ireo na mampisy elanelany aza ny ‘saranga’. Isan'andro, mikarakara ny fandriana sy ny sezalava amin'ny tànany ireo mpiasa an-trano fa tsy mahazo mipetraka na matory eo akory na indray mandeha monja aza. Miaraka amin'ireo anjara asany ao an-trano, ‘manakaiky’ ireo vehivavy amin'ny saranga antonony izy ireo ary ‘mifanalavitra’ ihany koa anefa.
Jereo ny sary fanadihadiana ato.
Any India, miasa mafy ireo vondrona miaro ny zo sy ny governemanta mba hametraka ireo zon'ireo mpiasa an-trano ary miezaka ny mametraka fandaharampotoana hametrahana ny asan'izy ireny ho ao anatin'ny lalànan'ny asa. Tato ho ato izao, ireo vondrona tsy mitady tombontsoa, toy ny “Maid in India” (Mpiasa any India), sy ireo vohikala misahana ny asa ikatsahana tombontsoa ety anaty aterineto na ireo tolotra amin'ny finday no nihetsika ho mpanelanelana miady ho an'ireo mpiasa mba hahazo karama mifanandrify amin'ny asany. Mitombo ireo olana satria mbola animbinan'ireo masoivoho na mpanera ireo ihany ireo karama kelin'ireo mpiasa an-trano ho saran'ny tolotra, izay tsy voafehin'ny lalàna.
Kanefa, mila hovaina ihany koa ireo toetran'ireo mpampiasa izay mampiasa ireny mpiasa an-trano ireny, izay noho ny fahantran'izy ireo dia voatery manaiky ireo fepetra mitanila momba ny asa, na amin'ny asa, na ny fotoana na ny sarany.
‘Tsy mila zavatra be hitondràna fanovàna goavana amin'ny fiainan'ny olona iray!’
Tsy mahagaga, lasa nalaza be tamin'ny Aterineto ny lahatsoratr'ilay mpampianatra ara-pinoana, mpanoratra sady mpanabe, Nithya Shanti, tao amin'ny Facebook nandritra ity Diwali ity.
Sary nalaina maimaimpoana tamin'ny pejy Facebook-n'i Nithya Shanti
Nizara fotoana iray i Shanti, nomeny ny lohateny hoe “Nahoana no nanapa-kevitra ny nanasa ny fianakavian'ny mpanampy anay hisakafo hariva ny reniko”. Nanazava izy:
Nahazo aingam-panahy avy tamin'ireo namany, nanomboka fomba vaovao ny reniko tao an-tranonay ny alina lasa teo. Nanasa ny fianakavian'i Madina mpanampy anay ho tonga hisakafo hariva ao an-trano izy. Naniraka mialoha ahy sy dada izy handeha hividy ireo entana, ary nikarakara sakafo manokana ho azy ireo. Nisakafo niaraka izahay ary nanana resadresaka nahafinaritra.
Sambany izahay no nanao zavatra toy izany tao amin'ny fianakavianay. Toy ny zavatra tsy mampino ny mahita ireo fianakaviana manontolon'i Madina nipetraka teo amin'ny sezalava sy niara-nihinana ny sakafo hariva teo an-databatra fihinananay sakafo. Tena zava-dehibe tokoa io amiko satria tsaroako aho nanana adihevitra lehibe izay tamin'ny reniko, fony zaza, mikasika ny hoe nahoana ireo mpanampy anay no tsy afaka mampiasa ireo fitaovana ampiasainay! Miafara amin'ny tomaniny foana io ary miverin-dàlana aho. Araka izany, afaka saintsaininao hoe hatraiza ny fahagagàko nahita ny reniko nikarakara io sakafon'ny Diwali io tamin'ny fandraisany fanapahan-kevitra manokana. […]
Toa fanombohan'ny fombafomba vaovao ao amin'ny fiankavianay io, izay antenaiko fa ho hatsaraina hatrany hatrany rehefa mandeha ny fotoana. Nahakitika sy nanokatra ny foko tamin'ny zavatra hafa maro io. Nangataka ny zanany lahy handefa amiko ny karazana solosaina ilainy aho, ary eo am-pijerena hoe ahoana no azonay atao amin'izany ho azy. Tsy mila zavatra be hitondràna fanovàna goavana amin'ny fiainan'ny olona iray!
Vakio ny lahatsoratra manontolo ato.
Nozarazarain'ireo media maro amin'ny Aterineto ilay lahatsoratra, toy ny Huffington Post sy ny The Logical Indian ary niteraka adihevitra betsaka tao amin'ny Aterineto.
Nankasitraka ilay fihetsika ny sasany:
Eo amin'ny fotoana anombohanao mieritreritra mihitsy hoe miaina ao amin'ny tany vatovatoina ianao & manomboka manary toky, misy tantara sahala amin'izao mipoitra ary mandravona ny zavatra rehetra…
Ankehitriny, tokony ho tahàka izao no ankalazainareo ny fetinareo !
naneho hevitra tao amin'ny The Logical Indian i Lakshminarayanan Kolipaka avy ao amin'ny Kolejy Kristiana Madras : “faly mahita fironana vaovao miditra ao an-tokantrano. Antenaina ny hoe mba hiparitaka io.”
Fa mbola misy toerana maro ho an'ny fiovàna, anefa, any amin'ireo fihetsika fanaon'ny vahoaka :
Tsy misy dikany koa izany. Tena marina, vaovao ve izany hoe manasa ny fianakavian'ny mpiasa an-tranonao hisakafo izany?!
Ao amin'ny LinkedIn, Sonjai Kumar, mpitantana orinasa, nanasongadina zavatra lehibe iray hafa, momba ny resaka fanajàna ny mpiasa an-trano — matetika manana andraikitra mitaiza zaza ihany koa ireo mpiasa an-trano any amin'ireo tanàndehibe ao India, ary amin'izany toerany izany, manana anjara amin'ny fanefena ny toetsain'ireo zaza ankehitriny ho amin'ny hoavy ihany koa izy ireo:
Lasa manana anjara toerana lehibe amin'ny fomba fiainan'ireo ankizy ankehitriny ireo mpiasa an-trano, ary sarotra ny misaintsaina fiainana tsy misy azy ireo. Afaka lazaina hoe, amin'izao fotoana izao, fototry ny orinasa any India ankehitriny ireo mpiasa an-trano, izay mbola ilaina be tokoa ny fandraisana anjaran'ireo vehivavy mpiasa .